डोनाल्ड ट्रम्प र हिलारी क्लिंटन दुवै फिरऊन सन्तानहरू? | मार्टिन भिजल्याण्ड
पृष्ठ नेभिगेसन मेनु
सदस्यता परिवर्तन गर्नुहोस्
प्रश्न प्राधिकारी आफैलाई सोच्नुहोस्
श्रेणी नेविगेशन मेनु
नयाँ संसार अर्डर
पुलिस एनएफआई ओएम
केस माइक स्टोक
नौकरी9/ 11 भित्र
युद्धहरू माथि उठ्यो
आफ्नै चलचित्र रेकर्डिङ
घर » सामान्य » डोनाल्ड ट्रम्प र हिलारी क्लिंटन दुवै फिरऊन सन्तानहरू?
मई 18 मा पोस्ट गरिएको, 2016 भित्र सामान्य, इतिहास |
चेतावनी: गणना (): पैरामीटर एक array वा एक वस्तु हुनु पर्छ जुन गणना योग्यमा लागू गर्दछ /home/martinvrijland/public_html/archive/wp-includes/class-wp-comment-query.php लाइन मा 405
टिप्पणीहरू बाहिर छन् डोनाल्ड ट्रम्प र हिलरी क्लिंटनका लागि फिनल्याण्डको सन्तानहरू?
मेरो अन्तिम लेखमा मैले यो प्रायः उल्लेख गरें, अर्थात् संसार अहिले पुरानो फार्न रगतको माध्यमबाट चल्छ। सायद तपाईंले सोच्नुहुनेछ "अह, तपाईले व्यस्त मानिस बनाउनुहुन्छ!", तर यो अत्यन्त सार्थक अध्ययन हो, किनकि तपाईंले कसरी बुझ्नुहुनेछ कि कसरी इतिहास, वर्तमान र भविष्य जोडिएको छ। तपाईले पनि पत्ता लगाउनुहुनेछ कि साँच्चिकै कुर्सीबाट बाहिर निकाल्ने र कार्यवाही गर्न यो समय हो। मिडियाले उल्लिखित छवि भनेको छ कि अमेरिकी चुनावको प्रारम्भिक कार्यक्रममा एक भयानक युद्ध हो। मीडिया पनि एक सफल व्यापारी जस्तै डोनाल्ड ट्रम्प को छवि स्केच गर्न को लागि धेरै सक्षम छ। अमेरिकन ड्रीमको विचार दश वर्षहरू र पत्रकारहरूको लागि तपाईंको लागि विश्वसनीय रहेको छ र जीवनी लेखकहरू यो भ्रमलाई स्थिर राख्न सक्षम छन्। अहिलेको मृतक अमेरिकी हास्य अभिनेता जर्ज कार्लिनले यसो भने: "यो सपनालाई बोलाइएको केही छैन, किनकी तपाईंले यसलाई विश्वास गर्न सोच्नु पर्छ।" सम्पूर्ण मिडिया, चलचित्र उद्योग र व्यापारको संसारमा मानिसहरु एक प्रकारको सामूहिक ट्रान्सको समाविष्ट गर्न। धेरैका लागि, यो एक पुल धेरै टाढा हुनेछ जुन जर्ज क्लोनी, ब्रट पिट र एंजेलिना जोली जस्ता कलाकारहरूले प्रारम्भिक उमेरबाट समाजमा महत्त्वपूर्ण नैतिक कामका लागि काम गर्नेछन्। उनीहरूको राम्रो दृश्य र फिल्म र चमकदार पृष्ठहरूले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने बाटोको कारण, ठूलो जनहरू अभिजात वर्गका यी दूतहरूलाई धेरै ग्रहणशील छन्। उनीहरूको विश्वास एक कुलीन रक्त समूहको हुन सक्छ, पूर्ण रूपमा टाढा छ। केवल जब तपाईं पत्ता लगाउनुहुन्छ कि कसरी एलिटिस्ट शासक वर्गले तपाईंलाई खेल्छ र तपाईं जडानहरू मार्फत हेर्नुहुन्छ, तपाइँ कसरी बच्चालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ कसरी हेर्न सक्नुहुनेछ।
तल भिडियोको साथ सुरु गरौं, जसले बताउँछ कि डोनाल्ड ट्रम्प र हिलरी क्लिंटन दुवै फार्न सन्तान हुन्। को पाठ्यक्रम यो टाढा धेरै जाने, तर तपाईं त केवल फिरऊनले रूपमा उनको राज्यभिषेक अनुष्ठान समयमा रानी एलिजाबेथ द्वितीय पहनाया र प्राचीन मिश्रबाट एउटा ढुङ्गा माथि राखिएको थियो कि एक सिंहासनमा विराजमान थियो भन्ने तथ्यलाई हेर्न भने (हेर्नुहोस् यो चलचित्र 1 बाट: 08: 50 घन्टा) र यो कि सिंहासन एक किसिमको मिनी पिरामिडको माथि थियो (पढ्नुहोस् यहाँ), त्यसपछि यो थोडा थोपा सुरु हुन सक्छ। यो फरार खून धेरै महत्त्वपूर्ण छ र वैकल्पिक मीडियामा केवल केहि द्वारा उल्लेख गरिएको छ। यो लाग््छ कि यो पत्ता लगाउन यो सबैभन्दा ठूलो रहस्य हो। यदि यो सबै साँच्चै फिट बस्छ भने, त्यसमा अमेरिकामा चुनाव जित्ने कुरामा फरक पर्दैन। यदि तपाईं विषाक्त रेखाबाट दुई साँपबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, तपाइँ निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि तपाइँ विषम साँप प्राप्त गर्नुहुनेछ।
सम्पूर्ण कथा बाइबलमा झूटा इतिहासको साथ सुरु हुन्छ। मा यो लेख मैले अब्राहाम जस्ता ऐतिहासिक पुर्खाहरूलाई फिरऊनका लागि बाइबलीय आरोपहरूको कसरी वर्णन गर्दछ भनेर वर्णन गरें। पुरातत्वले देखाउँछ कि अब्राहाम, उदाहरणका लागि, फरुन एमेनेमेथ भएको हुनुपर्छ। तल भिडियो मा तपाइँ पुरानो फरुन ब्ल्याकलाइनहरू कसरी शाही घरहरू र विशेषतया ब्रिटिशसँग जोडिएको देखिन्छ भन्ने सारांश पाउँदछ।
यो पनि उल्लेखनीय छ कि हामी आज एक साथ काम गर्दै छौं Jesuits अर्डर वेटिकन चलिरहेको छ। के हामी चाँडै भेट्टाउनेछौं कि येशूको यो आदेश साँच्चै एक पुजारी हो जुन येशूको सन्तान विश्वासी हो? यदि तपाईं त्यो समान वृत्तचित्र 1: 32 हेर्दै घण्टा, तपाईं क्लियोपेट्रा अर्को (हिब्रू) फिरऊनले 25 देखि मिश्र शासन गर्ने थियो पत्ता लगाउन। क्लियोपेट्रा रोमी सम्राट जुलियस सिजरले एक बच्चा थियो र लेखक राल्फ एलिस येशू रूपमा क्लियोपेट्रा र सम्राट्लाई छोरा वास्तविक नाम टोलेमी XV र उपनाम "Caesarion" थिए। क्लियोपेट्रा, संयोगवश, आफैले कुंवारी देवी आईएसिस को पुनर्जन्म (यो पनि हेर्नुहोस रेड बुल)। के त्यो नाम तपाईंलाई मतलब छ? र यो तपाईं जान्दछ कि येशू एक कुमारीको जन्म हुनेछ? के लाइट आउनेछ? जब सिजरले रोमी सेन्टनेटबाट परमेश्वरको घोषणा गरे, येशू (वास्तविकता) वास्तवमा एक कुखुराको जन्म (ईश्वरको वर्जिन मरियमले जन्मेका पुत्र हुनुहुन्थ्यो); जसको साथ मारिया वास्तव मा क्लियोपेट्रा को संदर्भित गर्दछ र यसैले इसइस को पुनर्मिलन)। अजीब बाइबल कथा स्पष्ट र स्पष्ट हुन सुरु हुन्छ। बाइबिल अनुसार, अब हामी पनि बुझ्न सक्छौं किन येशूले ईश्वरको पुत्र हुन भनी दावी गर्नुभयो। सीसरीयन (येशू) सीजरको छोरो हुनुहुन्थ्यो। 13 वर्षको उमेरमा, उनको आमाले राजालाई राजाको घोषणा गरे। जब सीजर आफैले आफ्नो वफादारले मृत्युलाई हटेको थियो, केसरियसले एक प्रकारको शक्ति वैक्यूममा प्रवेश गर्यो। हामी यो बाइबिलमा चिन्न सक्छौं, जहाँ येशू परमेश्वरको पुत्रको दावी गर्न निस्किन्छ। तार्किक, किन रोममा पावरको परिवर्तन भयो। अक्टोभियस, जुलियस सीजरको स्वीकृत छोरा रोममा सत्ता कब्जा गरे। सिजरको मृत्यु पछि, क्लियोपेट्रा तिनीहरूले3बच्चाहरु थियो जो, मार्क Antony सम्बन्ध थियो, तर Caesarion आधिकारिक अझै पनि सिजरले को वैध हकदार थियो, क्लियोपेट्रा आफ्नो जीवन लागि मानिसहरू डराउँदैनन्। अक्टेभियन (को हकदार Caesarion / येशूको लागि संभवतः देख) मिश्र आक्रमण गर्दा, क्लियोपेट्रा Caesarion लागि भाग्ने प्रबन्ध मिलाए। उनले उहाँलाई भारत पठाए। अन्ततः सेजेरियनले मिश्रलाई नाम Isus लाई अपनाए। यसले 'आइजिसका छोरा' को अर्थ थियो। यसकारण येशूको नाम योसबाट आयो। नाम मिस्र hieroglyphics मा पनि पाइन्छ।
1878 मा एक पुस्तक रूस र लेखक र सम्मानित पत्रकार निकोल नोभोच द्वारा प्रकाशित भएको थियो 'येशू ख्रीष्टको अज्ञात जीवन'। नोभोविचले उत्तर भारतको हिमालयको यात्रा गरेका थिए जहाँ पर्वतमा ऊ बौद्ध मठको भ्रमण गर्थ्यो। एक भिक्षुले उनलाई टाढा टाढा नाम आइस (आइससका अरबी नाम) बाट एक विद्यार्थीको पुरानो स्क्रोल देखाउथ्यो। पुस्तक रोल ईसा को वर्णन को रूप मा कुनै व्यक्ति को रूप मा एक भूमध्य देश बाट आए र एक किशोरी को रूप मा आए। नोभोविचले पत्ता लगाएको यो ईश्वरको अवशेषको अवधिले सीजरीयन वा आइसस / येशूलाई पसेको थियो। पचास वर्षपछि, नोभोभको काम एक हिन्दू भिक्षुले प्रमाणित गरेको थियो जुन स्क्रॉलहरू पुन: अध्ययन र अनुवाद गरिएको थियो। तिनले पढ्न सिकेपछि, वेदको अध्ययन र औषधि सिक्नु भयो, उहाँ मिश्रमा अलेक्जेन्ड्रियालाई फर्कनुभयो। उनी सम्भवतः उनको आमाको खोजीमा गए, तर उनलाई भेटिएन। उनी अब जिउँदैनन्।3वर्ष पछि उनी आफ्नो आधा-बहिनी र तिनका दुई अर्ध-भाइहरू खोजे (जसलाई मार्क एण्टीनीबाट क्लियोपेट्रा प्राप्त भयो)। तिनीहरूको सीरियामा जन्मजात भूमि थियो। यहाँ Isus / Isa / Caesarion (Jesus) को ट्रेल समाप्त हुन्छ। वृत्तचित्रको अनुसार येशूका दुई बाइबिल चेलाहरूले याकूब र थमसलाई बोलाए, येशूका दुई आधा भाइहरू हुनेछन्। बाइबलबाट मरियम र यूसुफले क्लियोपेट्राको परिवार भएको थियो जसले Caesarion (येशू) अपनाए। मरियम मगडेलेन येशूका आधा-बहिनी हुनुहुन्थ्यो (मरियम, कुंवारी देवी Isis, क्लियोपेट्रा को आत्म-घोषणा को पुनर्जन्म को छोरी)। दुवै मरियम (येशूका गोठालो आमा) र मरियम मगडेलेन (जसलाई मरियम क्लियोपेट्रा भनिन्छ भनिन्छ) येशूका बाइबलीय (मानिएको) क्रूसमा परेका थिए।
सेेसरीयन (येशूले) आफ्नो आधे बहिनी (मरियम मगडलिने / सेलेन) लाई बताउनुभयो कि उनले अक्टोभस मा रोमन साम्राज्यबाट आफ्नो विरासत पुन: घोषणा गर्नेछन्; हतियारहरू होइनन् तर नयाँ धर्मको निर्माण गरेर। उनले साम्राज्यलाई पवित्र रोमन साम्राज्यको नामकरण गर्न भविष्यवाणी गरे। संयोगमा, यीशुको बारेमा ईतिहासको 17 वर्ष बाइबलमा हराइरहेको छ। यो भारतमा आफ्नो अवधि अनुरूप र अर्को परिवारको खोजी गर्न सक्छ। 1 बाट: 46: 29 घण्टा उल्लेख गरिएको वृत्तचित्र के तपाईं यो 17 वर्ष को समयमा इंग्ल्याण्ड भ्रमण गरेको थियो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ भनेर हेर्नुहोस्। Cornwall को अंग्रेजी मा अझै दावी गरिएको छ कि येशू त्यहाँ कुनै दिन हुनेछ। अमीर यूसुफ (येशूका बाइबिलिक बाइबिल, तर वास्तवमा उनको चाचा / पादरी बुबा) टिन (कच्चा माल) को खोजीमा इङ्गल्याण्ड भ्रमण गर्थे। तिनले येशूलाई आफ्नो यात्रामा लगे। त्यस समयको क्षेत्रमा बासिन्दा जोसेल्टहरूले दावा गरे कि उनी एक 'उच्च हुने' सन्तान हुन्। उनले पनि आत्माको अमरतामा विश्वास गरे। तिनीहरूले नयाँ धर्मको सिजन (येशू )लाई अपनाए।
पश्चिम बैंकमा क्यूरान नजिकै 1947 मा 'मृत सागर स्क्रल' भेट्न सम्भवतः येशू र उहाँका अनुयायीहरूलाई एसेनेस भनिन्थ्यो। त्यस समयमा एक सशस्त्र समूह पनि Essenes को शिक्षाहरूको अनुयायी हुन लागे। वृत्तचित्रले भन्छ कि यी बेचेजहरू (अंग्रेजी, डच अनुवादहरू चिनिन्छन्) एक साम्राज्यवादवादी समूह थिए जुन अहिले शून्यवाद (राजनीतिक सेना) अन्तर्गत बाँचेका हुन्छन्। बाइबिल टाँग्ने रोमी साम्राज्यको उमेर मा शक्ति यो नयाँ धर्म प्रयोग तिर पुल भने थियो आफ्नो नयाँ धर्म र येशूलाई मानिसहरूले रूपान्तरण गर्न इतिहास र एक चाल को falsification थियो। पछि 1 बाट वर्णन गरिएको छ: 51: दस्तावेजमा 30 घण्टा।
यो पनि वर्णन गर्दछ वृत्तचित्र (1: 49: 40 घण्टा) बाइबलमा वर्णन गरिएको छ जो, Cana मा विवाह, येशू र उहाँका आधा-बहिनी मरियमलाई मग्दलिनी / Celena (क्लियोपेट्रा को छोरी, को कुमारी देवी Isis को आत्म-घोषणा पूर्वजन्ममा बीच शायद वैवाहिक थियो कसरी )। बाइबलीय कथा मा कहीं पनि त्यहाँ कुनै उल्लेख छैन जसको विवाह येशू बिरुवाको पानीमा बाँधेर धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। शायद येशूले पत्नी मारिया म्यागडालेना (Isis / क्लियोपेट्रा को छोरी) जो न्यूयोर्क स्वतन्त्रता को मुर्ति उच्च र्याङ्किङ्ग Freemasons द्वारा देखाइएको थियो। मरियम मग्दलिनी चित्रण गरिएको छ कि येशूको समय देखि अनुहार मुद्रण सिक्का बीच छवि तुलना र स्वतन्त्रताको मूर्ति को अनुहार, बलियो सम्झौताहरू प्रदान। लिबर्टीको प्रतिमाको गर्भवती गर्भवती चित्रण गरिएको छ। यसले संकेत गर्दछ कि येशूका सन्तानहरूले अमेरिकालाई नियम बनाउँछ। येशूको सन्तान छ - यो सारा विश्लेषण सही हो भने - रोमी सम्राट्को र परमेश्वरको मिश्रको फिरऊनले क्लियोपेट्रा (Isis को पूर्वजन्ममा) को सन्तान।
वास्तवमा, हामी यो निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ कि यो धेरै टाढा नहुन सक्छ कि पुरातनता वास्तव मा मिस्र फरुन रक्तचापबाट घट्यो। र यदि यो सत्य हो भने यो वेबसाइट दावी, त्यसपछि राष्ट्रपति ओबामा फिरौन Akhenaten को धेरै शौक हुनेछ। वेबसाइट theeventchronicle.com आफ्नो नसाहरु प्रवाह सबै 44 शाही / pharaonic रगत र अन्ततः सायद तपाईं अहिले बुझ्न किन मसीही पाठक हरेक प्रार्थनामा समाप्त फिरऊनले आमिन Meth आई फिर्ता ठेगाना लगाया गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति कसरी एक व्यापक सारांश दिन्छ "आमिन।" कि पुर्खा, हिब्रू फिरऊनको आमिन 'emeth-म को एक सन्दर्भ र उपासनाको छ, तर पनि अधिक सूर्य भगवान Amenra गर्न।
हामी "मानिस" को सन्तानले शासन गरेका छन् जुन आफैलाई देवताको रूपमा देख्नुभयो; फरारहरू। सायद उनीहरूले अझै पनि आफैले देवताको रूपमा हेर्छन् र यस म्याट्रिक्स विश्वमा वास्तविक अवतारहरू छन्। छोटोमा, तिनीहरू सम्भवतत्वहरू हुन् जुन यस म्याट्रिक्स संसारमा एक शरीर तल छन्; फारोनिक वंश हेल्सनको जन्म भएको एक शरीर। यी संस्थाहरूले यो म्याट्रिक्स संसारलाई स्थिर रूपमा नियन्त्रण गर्दछ जसमा तिनीहरूले मान्छेको रूपमा भोजन देख्छन्; ऊर्जावान खाना। यो बुझ्न उपयोगी छ कि केहि सम्राटहरु आफैले अवतार को नाम दिए र उदाहरण को लागि, बुझन को लागि क्लियोपेट्रा ले भन्यो कि यो आईइस को पुनर्मिलन थियो। उदाहरणका लागि सम्राट Constantine, आफूलाई आफूलाई देवताको रूपमा देख्नुभयो र खुला रूपमा आफूलाई अवतार भनिन्छ (हेर्नुहोस् यो docu)। रातो बुल ब्रान्डले रातो बुललाई बुझाउँछ (यसमा सिङ क्षेत्र आईएसआईको प्रमुख), जा रहेको छ शनि। हाम्रो वरपर हामी पनि गर्न सक्छौं प्रतीक यी भित्री शासकहरूलाई चिन्नुहोस्। यी 'मान्छे' आफैलाई विश्वास गर्दछ जुन तपाईं अझै पनि पूर्ण रूपमा बेवास्ता र हास्यास्पद खारेज गर्न सक्नुहुन्छ। यी एक संस्थाहरूसँग अर्को आयाम "फरार सन्तान" फरार सन्तानहरू, मानवजातिको ऊर्जामा रहन जुन भय, बिरामी र मृत्युमा उत्पन्न हुन्छ। यसकारण तिनीहरू शान्तिको लागि प्रयास गर्दैनन्, तर तिनीहरू युद्धहीन हुन्छन् र पैसा तर्फ, पैसा, सरकारहरू, धर्म र सेनाहरूका माध्यमबाट अराजकता सिर्जना गर्छन्। यो रोक्नको लागि एकमात्र तरिका अब तपाइँले खेलको लागि तपाईंलाई उधार दिनु हुँदैन।
स्रोत लिङ्क सूची: nu.nl, ensignmessage.com, 12160.info, theeventchronicle.com
मार्टिन स्वतन्त्रता op अर्नहेममा दुई क्रूरताले घटेको समलैंगिक समानुभूतिको बारेमा के हो?
realfraggy op प्रहरी हिंसा: 13 मानव प्रहरीले टिलबर्गलाई निषेधित गरेको छ किनकी उसले आफ्नो स्यान्डविच छोड्न चाहँदैन
मार्टिन स्वतन्त्रता op साजिश सोच, साथीहरूको दबाब र बहुमतको प्रतिक्रिया र पछ्याउने प्रवृति
बोल्नुहोस् op ब्रेक्सिट ब्रिटिश वित्तीय हृदयको लागि खराब छैन